Mee N'onwe Gị oru ngo iji egweri ihe ọkpụkpọ CD / DVD - Ikkaro
Inicio >> Igwe eletriki na igwe na-emegharị ite >> Mee N'onwe Gị oru ngo egweri ihe ọkpụkpọ CD / DVD
Ebukọta, jigharị ma jigharịa ihe agụ CD / DVD
Tupu ị na-arahụ ihe niile na-apụta n’enweghị mmanye, ma ọ bụrụ na akụkụ ọ bụla ịnweghị ike iwepu ya bụ n'ihi na iwepụbeghị kposara na / ma ọ bụ taabụ niile. Emela atụrụ site n’agbaji iberibe.
Anyị malitere imeghe ya nke ọma. Ọ baghị uru inye gị ntuziaka ka esi mepee ya, ebe ọ bụ na emere ụdị ọ bụla n ’ụzọ ọzọ. Nke a bịara na obere taabụ 3, nke megharịrị, kwe ka otu n'ime mkpuchi aluminom megharịa.
Na oge bụ okwu nke jiri nwayọ wepu iberibe ruo mgbe anyị rutere n'ime ime ebe ahụ bụ nke na-adọrọ mmasị.
Etufula ihe na-atụgharị na ya, atụfula ihe ọ bụla. Zọpụta na anyị nwere ike iwerekwa ihe niile ;-)
Ebe anyị na-ama na-ekele maka laser na igwe na-enweghị ike na-elekọta CD. Anyị na-aga n'ihu wepu kposara site n'akụkụ, iji nwee ike ịnweta iberibe ahụ nke ọma. Ozugbo anyị nwere ike, anyị ga-ekewapụ ya na bọọdụ eletrọniki.
Enweghị ihe ị ga-atụle. Anyị ga-edebe efere ahụ ugbu a, Ahapụghị m njikọ ọ bụla iji jigharị ya. N'oge a ọ bụ naanị m na-ewepụ ihe dị iche iche iji jiri ha mee ihe, ọ bụ ezie na ha niile ndị ahụ bụ SMD mgbe ahụ siri ike iji uru. Legskwụ obere abụba na-amasị m na ndụ m niile.
Disassemble nke na-ekewapụ gị ma anyị ewepụla akụkụ na-adọrọ mmasị nke onye na-agụ ya, m na-akọwa ihe oyiyi ahụ ntakịrị
CD mwepụ usoroLee anya n'aka nri bụ obere moto anyị ga-ahụ ugbu a n'azụ.
Laser n'ọnọdu usoro moto (Ihe nkuzi ahụ ahapụla anyị ebe a, n'ihi na m na-atụ anya na nzọụkwụ site na nkedo ahụ)
Ọ bụrụ na anyị ahụ nke a site na azụ
Anyị nwere akụkụ ọhụrụ, 5 nke bụ moto na-eme ka usoro ihe ọkpụkpọ CD na-arụ ọrụ, 6,7 na 8 bụ brushless, laser na moto si n'azụ.
Ọfọn, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ dokwuo anya
Anyị nwere ike ịga n'ihu na-agbasasị. Maka na nke a abụghị nkwụsị, ọbụlagodi mgbe ahụ anyị nwere ike dọwaa laser, brushless na nhazi niile, ma agaghị m aga ebe dị anya ma aga m ahapụ iberibe zuru ezu, nke bụ ihe anyị ga-achọ maka ọrụ akwadoro
N'onwe Gị oru ngo na akụkụ nke a recycled CD / DVD ọkpụkpọ
Ma ugbu a, ihe ị na-eche, ndị ahụ Mee N'onwe Gị oru ngo na-agụ akụkụ. Ọfọn, ụfọdụ ọrụ chọrọ mgbakwunye ndị ọzọ, ọ bụghị naanị ya na onye na-agụ ya, dịka ọmụmaatụ ọ dịịrị gị mfe otu Arduino, ma ọ bụ usoro 3 CD / DVD Ma ọ bụrụ na ị ga-eme mpempe akwụkwọ mini-3D, ị ga-achọ onye mmezi n'ezie.
Ọ dị mma, ejirila m nkwụsị na anyị nwere nsogbu na enweghị nzọụkwụ site na nzọụkwụ, mana hụ ihe ị nwere ike ime na mpempe akwụkwọ ndị a.
Ihe Nbipụta Bio
Ogbenye Nwoke 3D Printer
N'akpa uwe laser osise
Mbipụta site na onye na-agụ CD
Na moto Brushles
Iji rụọ ọrụ na-enweghị ntụpọ, ezughị iji jikọọ ya na voltaji yana yana igwe DC nkịtị, anyị ga-achọ ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma.
Ọ bụkwa ihe a na-ahụkarị ịme anemometa. M na-ahapụ rue mgbe yipụ ndị brushless na-ahụ ọtụtụ nke na-akpali ihe banyere nke a ụdị Motors.
Na stepper moto
Dị ka m kwuru, echere m ịchọta stepper moto dị ka nke ị ga-ahụ na nkuzi, yana ihe nkedo na-adịghị agwụ agwụ agbakwunye, enwere m olileanya na ị nwere chi karịa m, hehe
Arduino Mini Laser Akwụkwọ cutter
Arduino mini pen plot
The MicroSlice | Obere obere Arduino laser cutter
Kpachara anya maka laser, anya na akpụkpọ, ọ nwere ike ịdị oke egwu ma kpatara mmebi na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, emela ọrụ ndị a.
Pointer Laser Nke A Na-arụ n’ụlọ
Arụrụ Mgbakọ Laser
Na nke a anyị ji agwụ onye na-agụ ya. "M na-ekwe nkwa" ime oru ndị a tụrụ aro site na nkwụsị dika odi na Ikkaro. Know nwere ihe ọ bụla ọzọ na-adọrọ mmasị?
Categories Igwe eletriki na igwe na-emegharị ite Tags Bebụ Igodo bọtịnụ
Usoro na hacks iji were foto
13 kwuru na "Mee N'onwe Gị oru ngo egweri CD / DVD player"
Septemba 3, 2014 na 5:09 pm
Gut the Roomba nwoke ma kwụsị ndị na - agụ akwụkwọ site na afọ 90!
Septemba 3, 2014 na 5:13 pm
haha, nye m obere oge, aga m etinye ya n’ime ụbọchị ole na ole :) Ka anyị hụ ma m mere ka ọ rụọ ọrụ ma ọ bụ gịnị. Ma m nwere 4 ma ọ bụ 5 CD ma ọ bụ DVD Player na ị ga-uru nke ha ;-)
Septemba 12, 2014 na 4:17 pm
Anọ m na-eso ibe a site na amaghị aha ruo ogologo oge (ogologo oge), m ga-achọ
Septemba 12, 2014 na 4:18 pm
Anọ m na-eso ibe a site na amaghị aha ruo ogologo oge (ogologo oge), m ga-achọ inyere ibe a aka site na ịbubata ihe ndị mepụtara. Nwere ike ịnye m akwụkwọ mmeghe DIY na injinia? Abụ m onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na nke a, mana yana ezigbo echiche ma chọọ ịmụ ihe, echere m, ọ ga-aga ogologo oge! :)
Ọnwa iri 28, 2014 na 2:06 pm
mma karịa akwụkwọ N'onwe Gị akwụkwọ ma ọ bụ elektrọniki n'ozuzu, echere m na ị kwesịrị ilekwasị anya na ọrụ ị ga - achọ ime ma si ebe ahụ nyochaa ihe ịchọrọ ma mụta elektrọnik, igwe, mmemme ị chọrọ maka ha.
Ga-ekpori ndụ karịa ma mgbe ịchọtara na ị ga - abụ ọkachamara ;-)
November 5, 2014 na 12:04 am
Ana m anwale moto na-enweghị brush si na cd m maka ụgbọ elu rc, m ga-ahụ ka ọ si aga, m ga-agwa gị ma emechaa.
Jenụwarị 8, 2015 na 8:47 pm
Otu kpochapụwo ma ihe ijuanya bụ iji lens. Na nha ọ dị ka anya kọntaktị, ọ dịkwa mfe ikewapụ ... Ọ na-adị mfe n'ime iko na -eme ka ọ dị elu ma ọ bụ microscope ma ọ bụrụ na agbakwunye ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ glued na obere foto ọ bụla ma ọ bụ igwefoto vidiyo, dị ka kamera weebụ, ma ọ bụ mbadamba ma ọ bụ ekwentị. Wide zuru ezu maka ụmụ ahụhụ, lelee obere ụwa ebe ị ga-eji onwe gị lee foto ...
Machị 27, 2015 na 10:50 pm
Ahụrụ m akụkọ gị nke ọma.
ị nwere ike ịnwale ịme akara laser
Disemba 2, 2015 na 4: 14am
biko ọ ga-amasị m ka ị gbaa ọsọ moto Brushles, biko kọwaa m
Abụọ 10, 2016 na 7:25 pm
Ezi ehihie, agụọla m akwụkwọ ahụ, n'ihi na agbasasịwo m ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ ma achọrọ m ịhụ ụdị ahụ, ebe ọ bụ na m na-atụ uche moto stepper na auger agbakwunyere, m ga-ekwupụta na ihe kachasị mma, dị ka ndị m sirila mee , bụ nke ahụ dị ka nke dị na foto a, ebe ọ bụrụ na ị na-agba floppy draịva, ị na-ahụkarị ha na auger mmasị. Enwere m olileanya na ọ bụrụ na ị nwere nke fọdụrụnụ ma ịchọrọ injin ahụ, ị ​​ga-enyocha ya, n'ihi na n'ozuzu m dabere na ahụmịhe m, ọtụtụ mpaghara jiri ha.
Mee 25, 2016 na 11:07 pm
Ndewo, enwere m ajụjụ, aghọtaghị m ọtụtụ ihe banyere ụwa nke arduino, obere ihe banyere ndị ọkwọ ụgbọ ala, yabụ ana m ajụ ... enwere m ike iji pololu a4988 ọkwọ ụgbọala kama ndị mfe m kpọtụrụ aha na post? ebe ọ bụ na m nwetara ọkara ọnụahịa ahụ.
Febụwarị 23, 2019 na 12:23 am
Enwere m mmasị inwe ike ijigharị CD-ROM iji gee egwu (yana izipu akara vidiyo na ihuenyo). Echere m na site na bọọdụ Arduino, enwere m ike ijikwa ọrụ ndị ahụ, mana ahụbeghị m ihe ọ bụla gbasara ya. Onye obula m huru na ekwu okwu banyere iwepu ndi agha.
August 29, 2019 na 2:06 am
Ighapu ihe nile ka onye obula mee mana ime ihe na iberibe bu nsogbu
1 Ebukọta, jigharị ma jigharịa ihe agụ CD / DVD
2 N'onwe Gị oru ngo na akụkụ nke a recycled CD / DVD ọkpụkpọ
2.1 Na usoro
2.2 Na moto Brushles
2.3 Na stepper moto
2.4 Na laser